BGR - - Tele RELAY တစ်ခုအရှိဆုံးအမေဇုံအပေါ်ကိုရောင်း21 အတွက် Chromebooks သည်တစ်ခုမှာဆင်း 250 အမေရိကန်ဒေါ်လာဖြစ်ပါသည်
မူလစာမျက်နှာ » အပေးအယူ "အများဆုံးအမေဇုံအပေါ်ကိုရောင်း21 Chromebooks သည်တစ်ခုမှာဆင်းဖြစ်ပါသည် 250 အမေရိကန်ဒေါ်လာ - BGR
သင်သည်သင်၏ piggy သည်ဘဏ်ကိုချိုးဖျက်တော်မမူကြောင်းအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ပြောင်း Chromebook အတွက်ရှာကြသည်ဆိုပါကကွန်ပျူတာထက်ခဲသည် သာ. ကောင်း၏ Lenovo က Chromebook သည် C330 Convertible Convertible21 ။ ဤသည်ရောင်းအားအကောင်းဆုံးမော်ဒယ်ထိုကဲ့သို့သော YouTube နဲ့ Netflix နဲ့ထံမှအီးမေးလ်, ကို web browsing အတွက်, အလုပ်နှင့် streaming များဗီဒီယိုများအဖြစ်တာဝန်များကိုကိုင်တွယ်ရန်လုံလောက်သောအာဏာကိုပေးပါသည်။ ဒါဟာအစတစ်ခမ်းနား 11,6 လက်မထိတွေ့မျက်နှာပြင်ရှိပြီးတက်ဘလက် mode မှာအသုံးပြုမှုအတွက်အပြည့်အဝပွင့်လင်းလှည့်နိုင်ပါတယ်။
Laptop ကိုစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်: Chromebook သည် C330 တစ် Processor ကို MediaTek MT8173C, Chrome OS ကို, LPDDR34GB ကို eMMC 64 GB အထိနှင့်ပိုပြီးတပ်ဆင်ထားသည်
ပြောင်မြောက်သည့်ဒီဇိုင်း & စတိုင်: အံဝင်ခွင်ကျစတိုင်နှင့်လုံခြုံတစ်ခုလက်မအထူ 360 lb. ထက်လျော့နည်းတိုင်းတာခြင်း 2,6 ဒီဂရီဤပြောင်းမှတ်စုစာအုပ် နေ့စဉ် computing နှင့်မာလ်တီမီဒီယာများအတွက်စုံလင်သောတစ်ဦး touchscreen က FHD က IPS 11 လက်မ, အွန်လိုင်းသို့မဟုတ်အော့ဖ်လိုင်းနှင့်အတူပေါ့ပါး
အာဏာ PROCESS: အားလုံး, Google Drive ကိုမှတဆင့်အကြိမ်ကြိမ်တာဝန်များကိုတစ်ဦးအမြန်စတင်များအတွက် eMMC သိုလှောင်မှုမြန်ဆန်တင် software နှင့်အပိုဆောင်းသိုလှောင်မှုမိုဃ်းတိမ်ကို3GB ကိုလုပ်ဆောင်သောကြောင့် LPDDR100 မှတ်ဉာဏ်သင့်ရဲ့နေ့စဉ်လုပ်ငန်းများကိုများအတွက်အစွမ်းထက်ကုသမှုခံစားကြည့်ပါ သင်၏ Chromebook ကို C330 အပေါ် Lenovo က
ချိတ်ဆက်ဖို့တည်ဆောက်: I / O များအတွက်အပြည့်အဝထောက်ခံကြောင်းကို USB-C မှာ, SD နှင့်ကို USB ဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူ Chromebook သည် C330 အပေါ်စံနှုန်းဖြစ်ပြီး 3.0
အသုံးပြုရလွယ်ကူ: အဆိုပါ Lenovo က C330 Chromebook သည်, သုံးစွဲဖို့လွယ်ကူသည်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကိုတည်ဆောက်ထားပြီးရှည်လျားသောဘဝဘက်ထရီနှင့်အတူလည်ပတ်နေဆဲဖြစ်သည်။ configuration များလိုအပ်ပါသည်အဘယ်သူမျှမ, သင်ရုံသင် cloud storage ကိုအသုံးပြုနေသင့်အီးမေးလ်, မြေပုံများစာရွက်စာတမ်းများနှင့်ဓာတ်ပုံများကိုတစ်ဦးက Google account တစ်ခုလိုအပ်ပါတယ်
။ လိုက် Twitter ပေါ်တွင် @BGRDeals စျေးကွက်၏နောက်ဆုံးကမ်းလှမ်းမှုသင်အသိပေးထားရန်။ Web ကို။ ပမာဏကန့်သတ်ဖြစ်နိုင်သည်။ စျေးနှုန်းများအသိပေးစာမပါဘဲပြောင်းလဲပစ်ရန်ဘာသာရပ်ဖြစ်ကြပြီးကူပွန်မည်သည့်အချိန်တွင်မကုန်ဆုံးစေနိုင်သည်။ BGR ဤဆောင်းပါးကိုတဆင့်ထားရှိအမိန့်အပေါ်တစ်ဦးကော်မရှင်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
Philips က Intelligent switch ကို $ 50 အခန်းထဲမှာတစ်ဦးချင်းစီမီးသီးတစ်စမတ်ထိဖြည့်စွက်ရသောအခါအဘယ်ကြောင့် 22 $ အရောင်နှင့်အတူအနှောက်အယှက်? - BGR
TECH & Telecom1,562